Echiche ohuru na nke doro anya! : Martin Vrijland
Echiche ohuru na nke doro anya!
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 2 Ka 2017	• 44 Comments
Rememnye chetara ihe onyonyo si n’otu ihe nkiri ‘The Matrix’ nke 1999 nke ihe ọ bụla na-agafe agafe nwere ike ịbụ ‘onye nnọchianya’? Kemgbe ụbọchị m malitere ide ihe, nnukwu mkpọsa ebidola ime ka m dị oji. Nke a gosipụtara onwe ya na peeji ndị na-ahụ maka pulp niile na - enweghị akwụkwọ, na onye ọ bụla na - ele Facebook Facebook anya na - ejikọ onwe ya na njikọ a. Nke ahụ kwesịrị ịkwụsị ya ma o doro anya na ọ na-eme ya.
Ndị mmadụ achọghị iso n'òtù ndị na-eso “onye nzuzu na-eche echiche”. Nkparị ahụ na-eme n'usoro ma na-eme ihe ike ma na-egosi na a na-ahazi nke ọma site n'enyemaka nke ndị isi ala (ihe akaebe nke enyerelarị ebe a na saịtị ahụ). Mmetụta ahụ na-eyi egwu na-echetara 'nnwale nnwale ise nke otu enwe enwe na-ata ndị ọzọ enwe ozugbo ọchọrọ ịrịgo n'elu ubube ahụ. Emere ihe omume otu a mgbe mmiri oyi ugboro ugboro n’otu n’otu na-achọ ịrị ugwu ahụ (lee ebe a nkọwa zuru ezu nke nnwale ahụ). Ihe mgbaru ọsọ nke ọgụ ndị a bụ abụọ; n'otu aka, o kwesịrị ịkwụsị m ịnọgide na-ede akwụkwọ, n'ihi mmetụta nke ịnọpụ iche; N'aka nke ọzọ, ọ na-egosi ndị ọzọ na ha ekwesịghị ịrị elu na ọkwa ahụ. Ozi ahụ emezughị. Ana m aga. Mgbochi mgbado, a na-akpọ na na fim The Matrix.
Ndị na-ahụ maka ihe nkiri ahụ The Matrix nwere ike ibili n'oge ọ bụla. Onye ọ bụla yiri ka ọ ga-enwe ike ịgbanwe onwe ya ozugbo na onye ọrụ ya ozugbo Neo na-egosi na matriks. Ma eleghị anya ị matara nke ahụ; ma ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu ebe ọ bụla n'ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ banyere isiokwu ndị na-emetụta ọdịdị eziokwu nke ndị mmadụ. Ofufo ndị mmadụ nwere ike na-buru ibu iro, n'ihi na ha na-ezute na echiche na-akpali ha nghọta nke ụwa. Morpheus, bụ onye ọzọ na-ahụ maka ihe nkiri ahụ, na-akọwa na vidiyo n'okpuru otú nke a si abịa. Dị ka ogologo oge dị ka ndị mmadụ na-adịghị ahụ site na anyị na-ebi echiche efu n'ezie, wuru site oké atụpụta ụkpụrụ ụlọ (dị ka na-asọpụrụ na J.Randall nzuzo ọha mmadụ), na-eche nche site nọ n'ọkwá dị elu na klas na-ada ọnọ site na onye ọ bụla ma na-aghọta usoro ya mere ya onwe ya bụ onye nlekọta nke usoro ga-agbanwe ozugbo ị na-akụtu usoro; ọ bụrụhaala na ha ga-agbanwe ma gbanwee ụzọ ahụ n'ihu gị ozugbo. (gụkwuo n'okpuru vidiyo)
The sequels nke matriks trilogy akpatre eziga a ụdị singularity n'etiti usoro nke oké-atụpụta ụkpụrụ ụlọ na-akpọte n'ụra ndị mmadụ; adịru ịdị adị nke usoro ma ọ bụrụ na ọ na-ratified site ọma adịghị agwụ agwụ okirikiri nke Neo na-alụ ọgụ usoro na-ahụ site na. Nke a bụ n'ezie ọchịchọ nke ndị transhumanists na ogwe aka ike. Mkpụrụ obi a kpọlitere akpọ ga-emesị kwenye na ịdị adị nke Matrix ma nwee obi ụtọ na-enweghị ngwụcha nke nwere ike ibili. N'ezie, film ama ekpughe a na-agbasa echiche film, na ukwuu eziokwu, ma n'iru kwupụta singularity anyị bụ ụmụ mmadụ dị ka Google si frontman Ray Kurzweil na Michio Kaku nụrụ banyere (lee ebe a).
N'ihi ya, ọ bụ ihe siri ike na-akpali ndị mmadu ka ha si na usoro ahụ pụta. Ma gịnị bụ usoro ahụ? Kedu ihe bụ matriks? Iji nwee ike ịghọta nke a, ọ bara uru ịhụ ihe ndị mmadụ dị ka Ray Kurzweil, Michio Kaku, Elon Musk na ndị ozioma na ndị na-anya transhumanism. Ha na-eche na anyị 2045 na-enwe ike ime ya nanotechnological wepụtara (mbipụta) nke ahụ mmadụ nke anyị nwere ike bulite anyị nsụhọ. E gosiputara nke a n'uzo di nma na ihe dika okwu na Transcendence. Ha na-echekwa na anyị bụ dijitalụ kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwu iji kee ụwa ndị dị ka ihe dị adị na ndụ na ebe anyị nwere ike ịdị ndụ dị ka a ga-asị na anyị bi ebe ahụ n'ezie. Chee echiche banyere egwuregwu ebe ị na-emepụta iko iko eziokwu na nke ị na-eme ka ị mara onwe gị na egwuregwu ahụ. Ma na a n'ụzọ na nsụhọ ka tọrọ atọ ụbụrụ anyị, dị ka ọ na-asọkọta ọnụ na 'ígwé ojii', ya mere, anyị na-agaghịkwa nwere ọdịiche n'etiti anyị ahu, ụwa anyị, anyị eluigwe na ala na digitally kere universes. Nke ahụ abụghị nkwekọrịta izu nzuzo; nke ahụ bụ ihe ndị nchịkwa a na-akpọsa. Biko lelee YouTube site na ịchọ aha ndị a kpọrọ aha ya na okwu ahụ bụ 'ịkọ abụ'.
Dị ka ndị ụkọchukwu dị otú a, ndị ka nwere ike ịkpọ ndị ahịa azụmahịa na-aga nke ọma (gụọ ebe a), na-ekwenye na anyị nwere ike bulite ikike anyị iji rụọ ọrụ na-emepụta ụwa, ma, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, jikọta 'igwe ojii', ị nwere ike ịjụ ma ọ bụ na ọ bụghị ikpe ahụ ugbu a. Nke ahụ bụ ihe nkiri nke ihe nkiri ahụ bụ Matrix. Chee echiche ma ọ ga-ekwe omume na eziokwu ị na-ebi nwere ike ịbụrịrị ihe e kere eke. Buru n'uche akụkọ banyere okike banyere okpukpe dị iche iche. Ndi ekeme ndidi? Ma eleghị anya, ọ ga-abụ na mmiri gafere ọtụtụ ndị. Dr. George Smoot nyere ihe ngosi TED nke yiri nke a. Were oge lee ya anya. Maka ihe ọ bụla, sayensị na transhumanists na-arụsi ọrụ ike n'isiokwu a. (gụkwuo n'okpuru vidiyo)
Mgbe ahụ, anyị na-abata ajụjụ a na-eche n'echiche ma ọ ga-ekwe omume na nghọta anyị dị ugbu a n'ime usoro. Cheedị na Google nwere ike ịmepụta ihe omimi a nke Ray Kurzweil na-agbasa ma ị kpebie ịkwalite nghọta gị na nke a. Ònye na-achịkwa ahụmahụ gị n'ezie? Nke a bụ n'ezie onye njikwa 'igwe ojii'; onye nchịkwa nke nkwekorita Artificial Intelligence; onye nchịkwa nke kwadoro nsụhọ gị; Google. Ọ ga-abụ na ọnọdụ a emetụtala? Nke ahụ nwere ike ịbụ ihe mgbagwoju anya nke na-emetụta ọtụtụ ndị. Ma ọ bụrụ na ị na-echeghachi azụ na fim ahụ bụ Matrix na ị na-eche na Hollywood dị n'aka ndị ọkachamara nke na-enye anyị echiche na scifi bụ ihe ngosi efu nke ị na-enwe mgbe ị na-aṅụ biya na akpa nke agbụrụ. na-ewepụ, ị nwere ike ịnwe nsogbu ka ị gwuo n'ihu.
N'ọtụtụ isiokwu, ebe nrụọrụ weebụ na-akọwa otú eziokwu anyị bi na ya si yie otu mkpụrụ mkpọrọ mkpụrụ obi; dị ka Google nwere ike ijide ọhụụ anyị n'ọdịnihu ma ọ bụrụ na anyị kpebie ịkwado ya na mbara igwe dijitalụ (Kurda) & k. Biko mee nsogbu iji gụọ isiokwu ndị ahụ n'okpuru ihe nchịkọta nhọrọ 'na matrik','karịrị akwụkwọ edemede'na edemede ndị ọzọ. N'ezie, ị pụkwara ịnọgide na-ekwere na enweghị usoro ọ bụla na Martin Vrijland chọrọ ịkpọsa akụkọ efu. Enweghị m ike ịkatọ gị maka nke ahụ. Ọ dịkwa mma ịchọta ma ọ bụrụ na enweghi mmetụta dị omimi nke ịmara na nchọta a amalite. The ahụ site ma ọ bụ tetara ugboro ugboro na-amalite ịhụ site na ụgha na media na ihe yiri ihe ndị mere eme falsification na pụrụ iduga chọpụtara na ihe J.Randall klas na-eme ka Saturn-ofufe. Mgbe ahụ, eleghị anya ịchọpụta bụ na Saturn nwere ike ịbụ mkpịsị nke chronos nke mkpụrụ obi mkpụmkpụ nke oge a. Hollywood na-ekpughe ihe dị na fim Interstellar si na 2014. Ọ bụghị maka ihe ọ bụla na fim a nwetara 6 prizes na 'Saturn Awards"(etinyela aha na aha) na 2015. Ị na-akpali iche echiche?
Ihe ndekọ njikọ njikọ: dị iche iche
Transhumanism, kedu ihe kpatara ya na ihe kpatara ya ji dị ize ndụ ugbu a?
Facebook ga - eji ọgụgụ isi mee nchọpụta ihe ị nwere ike ịgụ
Tags: agba, google, Martin Vrijland, Mazi. Smith mmetụta, ray kurzweil, dị iche iche, The matriks, trilogy
Ya mere, EU na - aghọ obodo nchịkwa nke nzọpụta ebe onye ọ bụla nọ n'okpuru steeti. Oputara iche si transhumanist obula na digital mkpọrọ (nchekwa net) na ụmụ mmadụ ga-enye ikpeazụ ọnwụ igbu na afọ ofufo nwesịrị n'olu.
"Ọ bụrụ na ịchọrọ ọhụụ maka ọdịnihu, were ya na ụgbọ mmiri na-ezute ihu mmadụ - ruo mgbe ebighị ebi."
Ọchịchị ndị isi ga-ebuli dịka EU Politburo si kwuo:
Atụmatụ Kalergi ka agbakwunyere na onye ọ bụla ga-efunahụ, nke mere na onye ahụ ga-agbada ọsọsọ na steeti.
Ọnụ ọgụgụ nchịkọta na nchịkwa n'ime EUSSR na-eji ụlọ ọrụ n'ihu dịka Facebook / Google wdg.
Austria na-achọ ọrụ ntanetị dị ka Alphabet Inc. si Google ma ọ bụ Facebook Inc. akwụ ụgwọ ụtụ maka azụmahịa na ndị ọrụ ịntanetị nke mba ahụ, na-anwa ịbanye na usoro ụtụ isi ka dị maka azụmahịa brick na-mortar.
Akụkụ kachasị oké njọ nke atụmatụ ahụ na-eleba anya ụdị azụmahịa nke Twitter Inc., Google ma ọ bụ Facebook: nkwekọrịta tacit nke nyocha, mmasị, ịkwado na tweeting free dịka ndị ọrụ. nke a nwere ike iji ya na ndị na-azụ ahịa.
ỌTỤTỤ ihe oyiyi SLOWLY ....
Njirimara Electronic na Europe:
Ihe ịma aka iwu na atụmanya n'ọdịnihu (e-ID 2020)
Ịgbanwe Ụdị Ngwá Ọrụ na Mmiri DIGITAL ..
IKE NA INNOVA
ỤLỌ Atụmatụ TION
Usoro Nkwado Nkwado ICT (ICT PSP)
nkwenye nke elec
ID nyocha (eIDs)
Ejiri aha zuru ezu: Achọpụta Ntụkwasị Obi N'akụkụ Ebe Ejikọtara
Ihe a kapịrị ọnụ maka eID
mmekọrịta n'etiti ọchịchị
Ị BỤ EBEE?
ANYỊ NA-AMATA NA NDỊ EZIOKWU EZIOKWU GỊ NA-AHỤ Unu ... A NA-EKWU. AKWỤKWỌ NDỊ NA-AHỤ NA EU NA GOOGLE / PALANTIR (CIA / NSA / DIA etc.)
Ala ọma jijiji ndị ahụ na Groningen ... e nwere ihe ndabere n'azụ nke ahụ nwere ike ịbụ ihe doro anya:
Ha dị njikere igbanye aka ha na NSA (SkyNet) ...
Ihe dị egwu na ị kpọrọ SkyNet, na Belgium, e nwekwara onye na-ahụ maka ịntanetị a na-akpọ Skynet. Aha ya mgbe netwọk dị na fim Terminator
Ma ọ bụrụ na anyị anya na ihe nkiri Terminator (5) Genisys ị na-ahụ na-agwa akụkọ SkyNet e kere ka infiltrate na 1 dum ụdị nke mmadụ na ike a siri ike adịghị anwụ anwụ agbụrụ. Nke a abụghị ihe Google chọrọ ime megide 2029 / 2045?
"Usoro nke ịnweta anwụghị anwụ ga-amalite site na 2029 mgbe a na-emepụta nano-bots nke nwere ike gbasaa n'ime ahụ anyị iji lụso ọrịa ọgụ"
Ọ bụghị na ihe anyị na-ahụ na fim Terminator, ahụ mmadụ nke ejiri ya na ihe nnochi?
Echefuru ịkọ akụkọ:
@CuriousOne, Ọ bụ NLP / subliminal ozi anyị na-ahụ gburugburu anyị na Hollywood bụ akụkụ nke ahụ. Ihe dị mma banyere ozi ndị a bụ 'Ha Dị Ndụ' site na 1988. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe a kpọrọ mmadụ anọwo njikere ruo ọtụtụ iri afọ maka mmejuputa nke atụmatụ aghụghọ a 'transhumanistic' nke mere na ha ga-apụ mgbe oge ahụ ruru.
YZ ọgbọ dị mma dị ka emepụtara ma ọ bụ. furu efu ma ga-adaba na nduhie a:
- Y = Ọgbọ Y bụ onye na-anọchi ọgbọ X ma a na-akọwakarị ya na oge 1982-2001.
- Z = Ndien ke akpatre utịt Z; onye ọ bụla amụrụ n'agbata afọ 1992 ruo ugbu a gua ya na ọgbọ a.
Google (DARPA) burukwa atọgbọ na United Nations Agenda 2030. Anyị na-niile jụrụ kemgbe Diaries 21 (Club of Rome) na okwu dị ka nkwado, mgbanwoe, wdg nke bụ karịa onye agha na CO2 nke bụ ihe dị oké mkpa potassium na ọdịdị na i nwere ike reconnect ka bi Mbelata (lee n'ihu Bill Gates banyere ịgba ọgwụ mgbochi)
SkyNet bụ (kwantum / D-Wave) database NSA na ndị agha ulo oru mgbagwoju (DARPA) na Genysis bụ a ngo na malitere na 2002 site 'United States Department of Defense si Ozi Awareness Office "a ngalaba e mesịrị mgbe ngagharị iwe (lee Office Inspection Information logo) nke a kpọrọ kagbuo na PRISM NSA bụ ihe si na nke a. N'uche m, ihe a nile ejirila n'ụzọ nkịtị na n'ụzọ ihe atụ. Lee ihe site na Elon Musk banyere DUMB na ajụjụ a:
BIG data bụ anwansi okwu jupụta ndị a ọdụ data na asusu bụ na ọtụtụ n'ime ndị a na onwe n'afọ ofufo ka a onyinye site na ha profaịlụ na Facebook, Twitter, Google+ etc na na ruo mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-eji Palantir software wdg enwere ike ichota ihe nkwado nke otu onye. N'ezie, ịzụ ahịa bụ ihe mara nnọọ mma, ya mere, ọ na-azọpụta ọtụtụ nnụnụ n'ime otu ọkpụkpụ dara ada. Njikọ njikota nke EUSSR na PSD2 na ndị ọzọ anaghị enwe nwa iji nweta ozi dị mkpa gbasara ndị mmadụ n'otu n'otu.
Na nkenke, ụgbụ ahụ ji nwayọọ nwayọọ kpuchie ...
Ma nke a bụ otu esi amalite ... nwoke ọ ka na-eje ozi dị mma?
Mgbe m na-ahụ ozi gbasara ọrụ nzuzo na ntọala ala, m na-ahụ mgbe niile banyere ọnọdụ dị na United States, mana echefu na nke a dị na Europe.
Iji nọgide na SkyNet wee ịmafe facebook, bụ facebook bụghị malitere tumadi ịchịkwa ndị mmadụ kama ma ịzọpụta mmetụta uche na echiche a nchekwa data n'oge mgbe ọ na-tinyere SkyNet ha edeelarị software nke kwesiri iji dabara àgwà gị ka i wee gbanye ya ngwa ngwa ma nwee ike ijide ahụ gị ngwa ngwa.
Ugbu a, ha nwere ikike ịchịkwa NLP na ozi subliminal ma meecha site Skynet banyere ahụ.
Ịpụpụ na nke a ga-abụ ihe na-agaghị ekwe omume n'ihi na a na-edepụta ngwanrọ nke ọma na ahụ gị ma ogologo oge ị jikọtara na ya, ka ịmatakwu ihe ọmụma ahụ ga-enweta na miri emi ị ga-adaba. Ọ gwụla ma ị nwere ike ịdọpụ onwe gị site na matrik ahụ wee nwetaghachi ahụ gị.
Ebe ọ bụ na m na-akpọte ndị ọzọ ma ọ bụ obere onwe ya, nke a mere 1-2 afọ gafere tupu m ghọtara ihe ziri ezi na ihe ọjọọ n'ihi na ọtụtụ ozi / disinfo bụ na net na YouTube na mgbe ụfọdụ na osisi nwere ike agaghịkwa ahụ site na n'ọhịa na Ahụla m otú ụwa si arụ ọrụ, ọ dịghịkwa m egwu ile TV ma ọ bụ ihe nkiri. Tupu, m na-ele fim n'ihi na ha na-akpali akpali na hallucinating mgbe m anya ugbu a m na-ahụ ihe ọ bụla ma na akara na zoro ezo ozi. Mgbe ụfọdụ, m ịkwụsịtụ a nkiri ịnwụde ya azụ na Max / m na-ege a kpọmkwem ndekọ 2-3 oge na m bụghị mgbe niile juru otú ụwa si arụ ọrụ. Na juru otú ọtụtụ mgbede ọnụ na-kegide ha TV dị ka ọ bụ ihe dị nsọ na ikwere ihe nile na e kwuru na-egosi. M na-ata ụta onye ọ bụla mgbe n'ihi na m na na na na otú ahụ ka m ga-enye ha ndụmọdụ ndị dị mma na m na-eso m na ka ha na-ahụ otú ọ niile dabara ọnụ, kwuru, sị ịhọrọ ndị uhie ma ọ bụ-acha anụnụ anụnụ Erere.
@CuriousOne, Ọ bụ banyere nchịkwa ụbụrụ (nghọta) otu onye emeela agadi ma ọ bụrụ na ị na-ele ahịa n'ime ụlọ ọrụ ndị agha (gụnyere DARPA). Ma ị na-elekwasị anya na usoro ugboro ugboro (ELF Waves). Dị ka Nikola Tesla si kwuo, ihe niile bụ ugboro ugboro na mmụgharị, ọ bụghị maka ihe ọ bụla bụ ihe njirimara ya ji 'ọnọdụ miri emi' mee ihe.
Ugbu a chee echiche banyere mmepe na mmejuputa nke 4G / 5G ma ugbu a a na-akpọ GRID na ala, na oké osimiri na n'ikuku. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ nweghị ụzọ mgbapụ si nyochaa mgbaàmà. ịbanye n'ime ya. N'ihi na dị ka akọwapụtara na akwụkwọ dị n'okpuru ebe a, nke m na-atụ aro ka ị nwee, obi adịghị enwe firewall. Ihe ọ bụla na-abanyeghị na ya ma ọ bụrụ na nhazi ahụ maka ndị na-emezi ihe na-emetụta ụbụrụ ka ukwuu ma ọ bụ dịkwuo nta mgbe ọ na-esote ihe ọmụma cq. eche echiche. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịchịkwa nke a, ị na-ezitere onye ahụ ngwa ngwa site na iji algortimes. N'okwu ahụ, enwere m ike ịkọwa ọrụ nke Marvin Minsky (ụbụrụ ụbụrụ) na Dr. Robert Duncan (whistleblower)
Echiche Vidio na "Atụmatụ Ngwá Agha": Ịgbanwe Ikike Nhazi nke Data
Kedu uzu ndị United States na-amụrụ na-enwe ike ịmebie ikike nke data na-arụ ọrụ nke mmadụ? The 7 July 1997 nke nke US News na World Report kọwara ọtụtụ na ọ bụ ha mere, ihe ndị ọzọ, na-ama jijiji nke ime nke ụmụ mmadụ, stun ma ọ bụ nauseate ha, na-etinye ha na-ehi ụra, ikpo ha, ma ọ bụ akụ aka ha n'ala a ujo ife  Teknụzụ gụnyere agụmakwụkwọ na-agba agba nke nwere ike ịmanye ụmụ akwụkwọ ịmechi; akwara ma ọ bụ nke na-eme ka nwa na-akpata ihe mgbu na spasms; gbanwee akụkụ ahụ nke na-akpata mgbu na spasms; na ebili mmiri nke nwere ike ịkụda ụmụ mmadụ ma ọ bụ ụgbọ elu na nke a ga - eji ya na ose na - agba ma ọ bụ ọgwụ. 
Na mgbanwe, ngwa ndị a nwere ike ịnweta ọtụtụ ojiji. Na ngwá agha, n'ihi na ihe atụ, nwere ike na-emegharị maka iji dị ka now axis égbè ma ọ bụ now ubi na, ozugbo ike, nwere ike na-echebe ụlọ ọrụ, aka na njigide anapụtakwa, akara riots, ma ọ bụ doro anya ụzọ maka convoys. Mmiri ndị a, bụ ndị nwere ike ịbanye n'ime ụlọ, na-enye ọtụtụ ohere maka ndị agha na ndị mmanye iwu. Ngwongwo ihe ntanetakwa, site na ịmalite usoro nchebe nke akụkụ ụwa, nwere ike ikpo ahụ ahụ, mee ka ọkpụkpụ dị ka ọrịa na-efe efe, ma ọ bụ mee ka ejide obi. Ọdịdị radiesị dị ala na-emetụta ụdị mgbaàmà na ọgbanaka ọkụ na ọkụ. Ihe ndi ozo choro ime ma obu gbochie ura, ma obu imetuta uzo uzo nke uzo, na-emeghari uche nke obi. Gọọmentị Russia ekwuwo na ha zụtara ihe mbipụta 100,000 nke "Nwa Nwanyị Di Nwunye." 
Otú ọ dị, echiche a banyere "ngwá ọrụ ndị dị ebube" bụ onye onye kwesịrị ịghọta ha. Brigadier General Larry Dodgen, Deputy nnyemaaka na Secretary of Defense maka Policy na Missions, dere, sị a akwụkwọ ozi ndị nchịkọta akụkọ banyere "ọtụtụ na-adabaghị" na US News na World Report isiokwu na "ịgha ụgha banyere ndị Department of Defense echiche."  Ihe mbụ Dodgen kwuru bụ na magazin ahụ na-akọwahiere iji teknụzụ ndị a na uru ha bara nye ndị agha. Ọzọkwa Ọ mesiri US nzube-arụ ọrụ n'ime akporo nke ọ bụla nkwekọrịta mba Banyere ha ngwa, nakwa dị ka atụmatụ inyefe (ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ redesign) ọ bụla ngwá guzogide Olee otú ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na-mara. Otú ọ dị, otu onye na-enwe mmetụta, ma, nchọpụta a na mpaghara a dị oke. Otu ndị Dodgen kwuru na mba ndị ọzọ ma ọ bụ ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri nwere ike ọ gaghị ejikọta ha n'otu nrụgide. O siri ike ichetụ n'echiche onye nwere ọchịchọ ka ukwuu iji tinye aka na teknụzụ ndị a. "Mmasị na-eyi ọha egwu" nwere ike ịbụ okwu nchịkọta ọzọ.
Good ngosi na njedebe nke a dị nnọọ mkpa ajụjụ Harald Kautz Vella (na 54: 40) na Creutzfeldt-Jekọb na nwere na ehi na ụmụ mmadụ na England ± 1997.
Enwere ihe ndabere ọ bụla maka nkà na ụzụ a? Aha Holosonic Research Labs na American Technology Corporation, ma ha nwere nsụgharị nke ụda ntụrụndụ a na-apụghị ịnụ. DARPA yiri ka ọ na-arụ ọrụ na ihe nkiri ihe nkiri nke ya. N'ụzọ na-akpali mmasị, Strategy Page na-akọ na eji Long Terre Acoustic Device dị ka ngwá olu Voice of God gbanwere:
Enwere m na 5G na Groningen, Friesland enweghi m ihe ọ bụla gbasara ya. Ewezuga na ha na-abanye n'ime nsogbu n'ebe ahụ:
"Ogige nlekota oru kachasị elu na Netherlands dị nso n'obodo nta Frisian nke Burum. Nkwado nkwukọrịta Satellite na-elekọta ndị ọchịchị Netherlands na ndị America site na nnukwu efere satellite. Ụlọ ọrụ nlekota a yiri ka ọ ga-eguzo n'usoro mmepe nke netwọk 4G na Netherlands.
The satellite n'ala ebe ke Friesland Burum, ebe Dutch AIVD (General Intelligence na Nche Service) na DISS (Military Intelligence na Nche Service) na satellite efere ada eavesdropping na ịbụ ndị nledo, na-emepe emepe 4G netwọk na Netherlands iyi nnọọ na ụzọ ndị na-eme nchọpụta nke Telecompaper chọpụtara. "
Ya mere o yiri ihe ezi uche na ha na-na na nsogbu a ka lossen..Friesland na Groningen ndị kwesịrị ekwesị dị ka a pilot ebe maka ụdị ihe, nanị n'ihi na e nwere ọtụtụ nke efu ohere na ezughị nwere njikọ na-ewu faiba glaasi .
Ọ bụghị ụdị ihe omimi ????
@ Averoes a nsogbu na Friesland bụ maka ịgbasa 4G / 5G network 3000 + MHz frequencies. 4G wụnye ha na-ama 800 / 1800 / 2600MHz ugboro 5G ga-arụnyere na 700Mhz nwekwara ike 2100 2600MHZ na ọ bụrụ na m na-ezighị. The ala ugboro ike na mgbaàmà, ma ala data okporo ụzọ, a ala mgbaàmà nwere ike ịbụ miri banye n'ime n'ime ụlọ na ike ịga mma ihe na ihe mgbochi. Nke dị elu karịa ugboro ugboro, akara ala na-adighi ike mana ogo okporo ụzọ nwere ike ịbụ.
Atụ na WiFi nke rawụta bụ na etiti ụlọ ebe ị ugbu a 2.4Ghz gbalaga na 5GHz gbalaga 2.4Ghz gbalaga nwere ike n'èzí ma natara ma a ga-kacha data ọnụego BV 150Mbs, ndị na-adịghị ike na mgbaàmà ndị na-erughị ndammana ma ka nwere ị ka na-enweta, na 5GHz gbalaga kacha data ọnụego bv 300 Mbs ga-enwe nanị nke a ga-mgbaàmà n'èzí home apụghị inweta.
niile na-adabere na otú na ebe mgbama na-ebute site ná, m maara na ha na-etinye ihe na ọzọ ọhụrụ ebe antennas na-na-nso emit elu frequencies na-enye ihe ngwa ngwa na dị ka ọzọ data. na nke a abawanyela na mmeghari ọsọ ọsọ na ọnwa ndị na-adịbeghị anya. Ha abụọ na ebe ọha na eze na ụlọ n'ime ụlọ / ụlọ ọrụ ebe Wi-Fi 3g / 4G na 5g kwesịrị ịnweta.
na-adọrọ mmasị na Duncan, kama ọ bụ mkpụrụ vaịn dị egwu ???
dị ka BBC a si kwuo BSE ntiwapụ gbawara gburugburu 1986:
Ihe nnwale a bụ maka m dị ka ntụ ọka .Maịlan na Groningen bụ ebe dị mma
Ndị ọrụ ugbo na Netherlands, karịsịa n'ebe ugwu (n'ebe ọwụwa anyanwụ), anaghị agba ume ka ha nọgide na-akọ ubi ha, lee usoro ihe omume:
'N'ezie ndị ọrụ ugbo na-azụ anụ mmiri 1000 ga - akwụsị'
Na ọnwa ndị na-abịanụ, 1000 ga-akwado ndị ọrụ ugbo na-azụ anụ mmiri 2000, na-atụ anya ka Secretary State Secretary Van Dam. Ọ na-eche na ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ ugbo ga-eji usoro nkwụsị ọhụrụ, akụkụ nke nkwekọrịta n'etiti ya na ndị ọrụ ugbo ara ehi nke European Commission kwadoro n'abalị a
Ọrụ ekpuchi maka ebe ndị na-ejikọta ọnụ ọgụgụ mkpanaaka
Ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ime ka ọnọdụ ụwa zuru oke na Netherlands nwere na nkwurịta okwu wireless. Ọ bụ ya mere Minista Kamp of Economic Affairs ga-eji nye ego maka ụgwọ ọrụ maka ọdịnihu, dịka ọmụmaatụ si na 5G. Ọrụ ahụ na-emetụta kpọmkwem ebe ndị mmadụ bi na Netherlands ebe ebe njikọ mkpanaka adịghị ezu. Minista Kamp ekwuputala nke a n'akwụkwọ ozi ya na Ụlọ ndị Nnochite anya. Tupu ọnwa a, gọọmentị kpọrọ 'mgbe niile na n'ebe niile' ịnweta nkwurịta okwu na-enweghị nkwanye ùgwù dị ka mkpa.
William Binney (nke bu NSA) na-akọwa:
Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a na-ahụ maka ikike nke mmepụta, njem na ahia, na nhazi nhazi nke ọnụahịa (ọ bụghị site n'ahịa). Na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi ọrụ kachasị nke òtù Kọmunist; na ndị mmadụ site na ịchịisi nke òtù niile na-elekọta mmadụ site n'otu nnọkọ ahụ.
Na - esote nke a, jiri akwụkwọ ndị dị na STORK (EU) tụnyere ihe ndị ahụ na - adabere na ihe DARPA (= Google, n'etiti ndị ọzọ) mepụtara site na ngwuputa Mmasị / Ọmụmụ Ihe Nile:
Njirimara Mmadụ na Anya (HumanID)
Ihe osise (site na saịtị IAO) na-akọwa ike nke "Project Identification at Human Distance" 
The Human Identification na a Anya (HumanID) oru ngo mepụtara akpaghị aka biometric identification teknụzụ iji chọpụta, Mara ma mata na ụmụ mmadụ mgbe dị anya maka "ike nchebe", mpụ, na "n'ala nna nche / agbachitere" nzube. 
Ihe mgbaru ọsọ ya gụnyere mmemme iji: 
Zụlite algọridim maka ịchọta ma nweta ihe sitere na 150 mita (500 ft) na nso.
Mee ka ihu na ihu na usoro 24 / 7 mmadụ nyocha.
Zụlite ma gosipụta usoro njirimara mmadụ nke na-arụ ọrụ 150 mita (500 ft) site na iji ihe osise a na-ahụ anya.
Debe usoro radar igwe millimita dị ala iji chọpụta nlele nlepu anya na ikiri ọkwa dị warara.
Characterize gait arụmọrụ site na vidiyo maka njirimara mmadụ na anya.
Zụlite ọhụụ multi-spectral infrared na anya ihu njirimara usoro.
The irony ???? ndị mmadụ ugbu a na-elekọta ndenye Facebook, Google, Twitter etc.
Google 'Sieg' Hire bụ ugbu a na-ebu amụma na vidiyo n'elu:
Ọ ghaghị ịghọ ụdị ọnụọgụ LinkedIn; ATS na ohere ohere search engine na otu. Ndị ọrụ nwere ike - dịka asịrị - post ọrụ (dịka e gosipụtara na ibe a), mgbe ị na-achịkwa ndị na-abata na-abata. Ochichi Google bu (o doro anya na) ejikwara aka na Google. Nke a ga - enwe ike ịnye ọtụtụ ozi gbasara ma ndị ọrụ ma ndị na - eme egwuregwu.
N'oge na-adịbeghị anya, m gara ụlọ ọrụ gọọmenti barracuda, blogspot. Oge ikpeazụ bụ ihe dịka 2 afọ gara aga n'ihi ịwakpo ndị agha mgbe ị na-agụ isiokwu 'Mr Smith', ma ọ bụrụ na edere m ya n'ụzọ ziri ezi, bụ nke onye nchịkwa gọọmenti Dutch bụ Jeroen Hogeweij dere, bụ onye so na Rotterdam
Ụlọ Masonic 'Cafard d' Or '(The Golden Cockroach)
N'okwu ndị na-adịbeghị anya na Barracuda, ndị na-emegide ndị na-emegide ndị mmadụ na-apụta ìhè:
Ndị na-emegide ndị na-emegide ndị na-eme ihe na-adịghị mma bụ Maud Oortwijn fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntọala
Maka ndị ọzọ, Micha Kut na-abịa, 'Onye uweojii ochie' na onye a na-akpọ onye mbụ na-akwado ndị omekome Koos Woudenveld na ọkpọ akuko ya banyere ụlọ ọrụ rolodex.
Ndị na-emegide ndị na-emegide mmadụ Hans Mauritz na Wim Dankbaar gafere,
Pizza ọkwado na shill 'seaman'.
Onye ọ bụla mara ihe n'eziokwu achọpụtawo ogologo oge na ndị a niile bụ ndị ụlọ akwụkwọ.
Ma ugbu a ọ na-edozi ihe egwuregwu a na-egwu.
Ha niile bụ kọleji gọọmentị nke Jeroen Hogerweij, nwere ọrụ dị iche iche, ma otu ihe mgbaru ọsọ ahụ.
Igosipụta na iche echiche nke uche 'iche echiche' / ndị na-achọ eziokwu.
Iweghachite, nke ga-abụ: Koos Woudenberg.
Ị ka nwere ike ịlele akụkọ banyere dick a: "Koos Woudenberg na-ekwu okwu n'elu oké osimiri na Sexbierum"
M na-akọ akụkọ a site na igbe ochie ahụ na olileanya na ndị na-achọ eziokwu na-azụlite nkà iji mụta iji mara psychopaths dị egwu.
Nke a egwu agbagọ na ya gbara ụka ọnụ chere tremendously ọma na-eme ihe n'ihi ya ka bụghị -as emekarị achịkwa mmegide gị n'ụlọnga Myra nke "Gwa Myra'- dị nnọọ a redio N'ajụjụ ọnụ, ma, otú chọrọ amasị ibu na ihuenyo.
Tinye njikọ / jikọta oghere ahụ, tinyere ndị ọzọ psychopaths na-arụ ọrụ nke gọọmenti dịka NIco van der Ham, Maud Oortwijn, Michael Vittaliti, Micha Kat.
Ndị na-ebute ụzọ na-achọ eziokwu, kpachara anya maka Nico van der Ham, o yiri ka ọ dị mfe, ma ọ bụ oke na uwe akwa.
Nwoke n'azụ Barracuda bụ ("odeakụkọ": gụọ AIVD-er) Jan Libbenga. Ọ na-arụkọ ọrụ ọnụ na club nke Jeroen Hoogeweij (onye so na Aleister Crowley na-emegharị òtù RTD).
Steve Brown (Salto TV) adịghị ada ụda dị ka kọfị kọfị ... ọ na-etinye uche na gburugburu Amsterdam
Site n'ụzọ, m (ịgụ) ahụmahụ na Barracuda bụ na Zioncore hardcore abụghị ihe dị oke egwu banyere ebe iwu na-akwadoghị nke Israel. N'ezie, ha na-efe ihe otu eziokwu ga-eme ka ọ kwenye n'echiche ya
Nke ahụ bụ eziokwu. Ziva (otu n'ime ndị dere akwụkwọ na Swapichou na Barracuda) bụ ọbụna ndị agha Israel na ndụ na Tel Aviv (nke akaebe). Ha nile bụ ndị ọkachamara ọkachamara na-agba ọsọ blọọgụ ndị a.
Na-achọkwa ndị ndú ụka ọhụrụ nke na-ejikọta akụkụ nke eziokwu na akụkọ dị egwu gbasara otu agbụrụ na ndị na-emekọ ihe ọnụ na-agwa gị na ị nwere ike inye onwe gị ike n'ụwa ebe a. Onye amụma ohuru: Martijn van Staveren. Kedu ihe ọ na-eri nzizi dị otú ahụ? Gịnị na-egbu bụ na otu na-achịkwa ọzọ media (Earth Ihe, Guido Jonkers (WantToKnow.nl, wdg) niile na-enye onye ọ bụla ubi. Ee, nke a nwa amadi na-ekwu okwu nke matriks. E nwere akụkụ nke eziokwu na ihe ọ na-ekwu. Na nke a, anyị na-emeso onye na-site na (na) ọmụmụ ya interdimensional / nwere n'ụwa ọzọ na kọntaktị. otú a ka ọ na-ama maara ruo a mega mgbagwoju ihe ọmụma banyere nnukwu mgbagwoju akụkụ na interdimensional Nigeria. ọ bụ ya mere ihe ọmụma na-enye site na a ọhụrụ guru (ma si otú nnọọ mgbagwoju na mere pompous). ke eziokwu na ọ bụ ihe niile hocus pocus ọtụtụ obere karịa ọhụrụ guru na-eweta. ọ bụ ga-abụ mpako nke ọzọ na-arụ ọrụ a okpukpe ọhụrụ na nke a na ìhè ọrụ. Alice Bailey. pairing na Saturn ubi, aghụghọ? Lezie anya maka hypnoses:
Ọ ka dị otutu ... nnukwu mgbagwoju anya ... ya mere ị ghaghị inye onwe gị ikike iji hụ na anyị laghachiri n'echiche. Ọzọ ụdị mgbanwe na ntinye dị ka anyị si mara ya n'okpukpe. Nabata ụwa nke Lucis Trust
Marcel Messing, nwoke nke mere m ka m pụọ n'oge nzuko nzuko Frontier ikpeazụ na Amsterdam ịdọ m aka ná ntị na "ha" nwere ike ileghara m anya mgbe ụfọdụ site na ngwá agha agha. Nwoke ahụ gbalịrị ịkpali egwu. Nwoke ahụ dekọtara ya maka Micha Kat. n'ihi na ị na-anụ na ụlọ ọgbakọ ma ọ bụrụ na ị na-a ìhè ọrụ nke "onye nkụzi nweghịkwa nwoke ma ọ bụ nwaanyị" (lee 12 :. 03 min) na ndị ụgbọelu nke ozizi nke Alice Bailey. Anyị niile maara onye na-anọchi anya na onye na-eme ya bụ: Baphomet. Nabata ụwa na okpukpe ọhụrụ nke òtù Saturn.
Marcel Messiah akpata gold n'ime okwu ihu ọha na circuit na bland kọfị prietpraat..Een nnọọ egwu obere Ihọd, ma mgbe ahụ, ọzọ, ọ bụ otu n'ime 't ihe club ọkụ ọkụ na-agbasa ụgha ìhè (ị pụrụ ọbụna na-ekwu a ụgha).
Na obodo a ị pụghị ime ihe ọ bụla, n'ihi na Große Lüge na-achịkwa:
Achọpụtakwara m na ha na-eji usoro ịmepụta ihe, ebe ha na-agwakọta eziokwu na ụgha. N'ikwu okwu ndị ọzọ ha jidere gị n'eziokwu na ụbụrụ ị na-agha ụgha ka ị ghara ịhụ oke ọhịa site na osisi ma ị daa maka 'ọgbọ ọhụrụ' aghụghọ.
Batara n'ime ụwa dị ebube nke nsị New Age. Site n'ụzọ, Ọgbọ ọhụrụ na-ahụ na Kabbalah / Zohar / Talmud.
Kpọmkwem: ezigbo ọkachamara
ma Van Staveren dara maka m site na nkata na okwu hypnosis ya na okwu ya banyere "onye na-abụghị nwoke maọbụ nwanyị" ...
Ọ na - eme ka ọ bụrụ ihe mgbagwoju anya na ọ bụ naanị ịghọta ma ọ bụrụ na ị na - akpakọrịta na ndị agha ndị a dị elu mgbe ọ bụ nwata: ya onwe ya na - etinye onwe ya n'ọnọdụ guru.
Ọ bụghị ihe niile na-atọ ụtọ na mgbagwoju anya ka ọ na-eme ya. Na n'ezie, anyị ekwesịghị ịghọ ndị ọrụ ọkụ. Enweghi ndi ozo ndi choro "ike".
Mark Passio enweghịkwa ntụkwasị obi na m. Ọ na-akọwa na Masonic atụ ebe a na m nnọọ mma (dị ka ma ọ bụrụ na e nwekwara ihe izi ozi) na bụ a supporter nke Aleister Crowley (onye a na-akpọ onwe ya anụ ọhịa 666).
Ọ bụrụ na ọ na-ekwu okwu banyere nkume nkuku nke a ga-ewepụ site n'ìhè site na nkwekọrịta nke onye okike, mgbe ahụ ọ bụ "ìhè nke Lucifer" (onye okike).
Nwoke a na-apụtakwa ụgbụ nchekwa dị ize ndụ n'anya m.
@Martin, mgbe Passio bụ onye nche ọnụ ụzọ na onye nduhie mana o nwere otutu ozi gbasara obodo ndị a dị mma ige ntị.
Ihe oyiyi a achọtara m na onye na-ahụ maka Ịntanetị na-enye ezigbo nkọwa nke mmalite nke obodo nile na Europe:
Ọhụrụ Age Age kabbalah
Enwere m ike ịkwụsị ịbịaru cosmogram. M na-anwa ịdọrọ ihe n'aka ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ. Echere m na ọ bụ nnọọ ihe na-atọ ụtọ ịme, ọ na-egosipụtakwa oyi dị omimi na nkọwa.
Hanneke, na-ekele gị nke ukwuu maka mgbakọ a na-adọrọ mmasị, nke ọma 2 ụbọchị na-abịa.
A kwadoro ya maka onye ọ bụla chọrọ ịbanye n'ime ịgụ kpakpando! "
Ị ga-eche na enyere ya aka na ibe ya.
Kedu ka ị si chọpụta na Obiọma na-emezu ọrụ dị ọcha nye ndị nrọ ahụ.
Mụ na ya, asụsụ ya na-eji oge zuru ezu, nwoke zuru oke, ma ọ bụ onye nzuzu ka ọ bụ onye nzuzu, ya mere, ọ bụghị dịka Nico van der Ham,
Gwa ya na ibe ya, lee njikọ dị n'okpuru ebe a: "ọbụna nne m hụrụ n'anya na-eche na m .... bla bla bla, ha ha ha ị gaghị emeli ihe dị njọ ma ọ bụrụ na ị dee na n'ime ihe dị njọ banyere njehie nke gọọmenti (ikpe ziri ezi) na ndị ọzọ
N'ikwu okwu banyere 'iro,' ahụrụ m otu isiokwu na-adọrọ mmasị dabara adaba: Ụgha-Ngwọta-Ngwọta.
Ndi ntorobia nke Europe adighi aka votu-ma ha di njikere isonyere nnupu isi
Ụmụ Europe na-eto eto na-arịa ọrịa nke ọnọdụ dị na Europe. Ha dị njikere ịgbanwe, dị ka nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya.
A jụrụ ndị na-aza 580,000 gburugburu na mba 35 ajụjụ a: Ị ga - achọ ịme òkè na nnukwu nsogbu megide ọgbọ na ike ma ọ bụrụ na ọ mere na ụbọchị na-esote maọbụ ọnwa? Ihe kariri ọkara ma ọ bụ 18 - ruo afọ 34 kwuru ee.
Enweghị ihe ọ bụla ... Netherlands (Orange = 33) na-ejedebe na ntụpọ 13e na òkè nke 33%. O yiri ka nsonaazụ VVD na-eme? , arụpụtara data? Ọ ga-eme ka ihe ndị ọzọ kwekọọ.
28 September 2019 na 17: 24
Ekpokoro a na-aga njem na Interstellar etinyela nso ụwa Saturn. Site na nke a na-agba agba na-aga ụyọkọ kpakpando ọzọ, ebe a hụrụ ụwa ebe ọ ga-ekwe omume ndụ.
Onye na-eme protagonist ahụ zipụrụ ozi site n'ọdịniihu gaa n'ihu ya, iji ziga ya na NASA, ebe ha na-arụsi ọrụ ike ịmalite njem gaa na okpo ahụ. Kaosinadị, okpo ahụ yiri ka ọ nọ ebe ahụ afọ 48. Enwekwara oghere ojii dị nso na wormhole ahụ, Gargantua. Ihe wormhole dị na fim ahụ yiri nke mbụ foto mbu nke oghere ojii nke ekwuputara tupu afọ a. Kinddị ịkọ ụdị amụma….
" Edith Schippers ugbu a chọkwara ka profaịlụ DNA gị
Elon Musk nnukwu ọchụnta ego ma ọ bụ DARPA signboard maka transhumane cyborg nwoke? »
Nleta ha: 2.519.847